ဝန်ဆောင်မှုကောင်းများနှင့် King Car Korea Motors | CarsDB
ဝန်ဆောင်မှုကောင်းများနှင့် King Car Korea Motors
King Car Korea Motors သည် အရည်အသွေးမြင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် အာမခံအပြည့်ရှိသော ကားများကို အထူးသက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်တင်သွင်း ရောင်းချပေးနေပါပြီ ။ ဝယ်ယူပြီးသော ကားများကိုလည်း King Car Korea Motors မှ အရည်အသွေးမြင့် Spare Parts များဖြင့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည့်အပြင် Service (၆)လ ၊ ကီလိုမီတာ (၁၀၀၀၀) အတွင်း အင်ဂျင်နှင့် ဂီယာဘောက်စ်အား ပစ္စည်းနှင့် လက်ခအခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
King Car Korea Motors တွင် Customer များအနေဖြင့်ကားနှင့် ပတ်သတ်သော ကားအပို ပစ္စည်းများကို လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ပြီး ကိုရီးယားကားမျိုးစုံကို မှာယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူပြီးသော Customer များအတွက် လည်း အပိုပစ္စည်းများကိုလည်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါသည်။
Korea နိုင်ငံ၏ အရည်သွေးမြင့်ကားမျာ ဖြစ်သော-
Porter (II) -1 ton Truck
Porter(II) -Double Caps
Proter(II) -Wing Body
Porter(II) -Ice Box
Porter(II) -Box Truck
Libero -1 ton Truck
Starex -12 Seat (A/T, M/T)
Grand Starex - 12 Seat (A/T, M/T)
Country Mini Bus -25 Seat ,29 Seat (M/T)
Bongo(III) -1 ton,1.2 ton,1.4 to
Bongo Coach -15 seats(M/T).
တစ်နှစ်ပတ်လုံးပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်ထားပါသဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကားများအားလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိင်ရန် နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
No. (6/7), A1 Street, Mingalardon Industrial Zone, Near Aung Mingalar Highway Bus Complex, Mingalardon Township, Yangon
Contact No – 09 420218084,
King Car Korea Motors သညျ အရညျအသှေးမွငျ့ ကိုရီးယားနိုငျငံထုတျ အာမခံအပွညျ့ရှိသော ကားမြားကို အထူးသကျသာသော စြေးနှုနျးဖွငျ့ တိုကျရိုကျတငျသှငျး ရောငျးခပြေးနပေါပွီ ။ ဝယျယူပွီးသော ကားမြားကိုလညျး King Car Korea Motors မှ အရညျအသှေးမွငျ့ Spare Parts မြားဖွငျ့ အခမဲ့ဝနျဆောငျမှုပေးလကျြ ရှိပါသညျ့အပွငျ Service (၆)လ ၊ ကီလိုမီတာ (၁ဝဝဝဝ) အတှငျး အငျဂငျြနှငျ့ ဂီယာဘောကျဈအား ပစ်စညျးနှငျ့ လကျခအခမဲ့ ဝနျဆောငျမှုပေးနပေါသညျ။
King Car Korea Motors တှငျ Customer မြားအနဖွေငျ့ကားနှငျ့ ပတျသတျသော ကားအပို ပစ်စညျးမြားကို လုံလောကျစှာ ရရှိနိုငျပွီး ကိုရီးယားကားမြိုးစုံကို မှာယူရရှိနိုငျပါသညျ။ ဝယျယူပွီးသော Customer မြားအတှကျ လညျး အပိုပစ်စညျးမြားကိုလညျး စြေးနှုနျးခြိုသာစှာဖွငျ့ရောငျးခပြေးနပေါသညျ။
Korea နိုငျငံ၏ အရညျသှေးမွငျ့ကားမြာ ဖွဈသော-
တဈနှဈပတျလုံးပိတျရကျမရှိ ဖှငျ့လှဈထားပါသဖွငျ့ လူကွီးမငျးတို့ ကွိုကျနှဈသကျရာ အရညျအသှေးကောငျးမှနျသော ကားမြားအားလညျးကိုယျတိုငျကိုယျကြ ရှေးခယျြဝယျယူနိငျရနျ နှေးထှေးစှာ ဖိတျချေါအပျပါသညျ။
Posted at: 24-07-2014 15:50 PM